जब उनीहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा रोक्छन् तब के हुन्छ? 🥇 अनुयायीहरू ▷ 🥇
जब उनीहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा रोक्छन् तब के हुन्छ?
अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईंलाई पछ्याउनुहोस् इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो। वास्तवमा, जब कसैले तपाइँलाई पछ्याउन थाल्छ उही आवेदनले तपाइँलाई सूचना पठाउँदछ ताकि तपाइँलाई थाहा छ र निर्णय गर्नुहोस् कि व्यक्ति अनुसरण गर्ने कि नगर्ने। तर कहिले थाहा हुन्छ के हुन्छ जब उनीहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा रोक्छन्, केस धेरै फरक छ र कुनै त्यस्तो चाल छैन जुन थाहा पाउन पनि भरपर्दो छ जब कसैले तपाईंलाई तपाईंको साथीहरूबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यद्यपि त्यहाँ धेरै स .्केतहरू छन् जुन उनीहरूले देखाउँदछ कि कोही व्यक्ति वास्तवमै उनीहरूका साथीहरूको समूहबाट तपाईंलाई भेटो गर्न चाहन्छ।
कसरी जान्ने जब तपाइँ इन्स्टाग्राममा ब्लक हुनुभयो तब के हुन्छ
अन्य अनुप्रयोगहरू र सामाजिक नेटवर्कहरूको विपरीत, के हुन्छ जब तपाईं इन्स्टाग्राममा अवरुद्ध हुनुहुन्छ जब संकेत गर्दैन कि जब कसैले तपाईंलाई तपाईंको साथीहरूबाट बेटा गर्छ। यस अर्थमा यो विकल्प यो प्रयोगकर्ता बीचमा गोप्य हुन्छ र जब तपाईं कसैको सामग्री हेर्न रोक्न चाहानुहुन्छ तर अनुप्रयोग अनुसरण गर्न रोक्न चाहनुहुन्न।
कसले अवरोध गरेको छ भनेर जान्नको लागि, यो भन्न आवश्यक छ कि त्यहाँ कुनै निश्चित मार्ग थाहा छैन। तर यी चरणहरू अनुसरण गर्दै, तपाईं एक ठोस विचार हुन सक्छ।
सिधा प्रयोगकर्ता खोजी गर्नुहोस्
अनुप्रयोग खोज ईन्जिनको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् तपाईले अनुमान गरेको प्रयोगकर्ताले तपाइँलाई ब्लक गरेको छ. यस अर्थमा, यदि व्यक्तिसँग इन्स्टाग्राममा निजी खाता छ जसरी यसले तपाईंलाई ब्लक गरेको छ भने, यो खोजीको परिणामको रूपमा पनि देखिने छैन। तर यदि खाता सार्वजनिकमा छ भने, यो देखाइनेछ मानौं यसको कुनै प्रोफाइल तस्वीर वा प्रकाशनहरू छैनन्।
तपाईंको सीधा सन्देशहरूमा जाँच गर्नुहोस्
जब तपाईंसँग प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ताहरूसँग यो समयमा यो सन्देशहरू उपलब्ध छैनन्, यो एक संकेत हो जसले तपाईंलाई ब्लक गरेको छ। र तपाई त्यो व्यक्तिलाई अधिक सन्देश पठाउन सक्षम हुनुहुने छैन।
व्यक्तिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोस्
यदि तपाइँले तपाइँलाई रोक्ने व्यक्तिको प्रोफाइल फेला पार्न व्यवस्थित गर्नुभयो भने, सम्भव छ कि फलो बटन देखा पर्दैन। यो यस्तो देखिन सक्छ कि यो देखियो तर अनुप्रयोगले तपाईलाई व्यक्ति पछ्याउन दिदैन।
तपाईंको सूचीमा हेर्नुहोस् अनुयायीहरू जान्नको लागि के हुन्छ जब उनीहरू तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा ब्लक गर्छन्
यो तुरुन्तै रोकिन्छ जब एक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा अर्को ब्लक गर्दछ। यी केसहरूको लागि त्यहाँ तेस्रो पक्ष अनुप्रयोगहरू छन् कसैले तपाईंलाई पछ्याउन रोक्दा तिनीहरूले तपाईंलाई सूचित गर्दछन्।
यदि तपाईं नाकाबन्दीको शिकार हुनुहुन्छ भने यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईंले त्यस व्यक्तिलाई बिर्सनु भयो र सबै चीजहरू प्रवाहित हुन दिनुहोस्। त्यसकारण नराम्रो मनोवृत्ति राख्नबाट जोगिनुहोस् तपाईंको पोष्टहरूमा अज्ञात प्रयोगकर्ताहरू उल्लेख गर्न वा ट्याग गर्न चाहानुहुन्छ किनकि यो एकदम कष्टकर छ। यदि यसको विपरितमा यो तपाईं जो ब्लक गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो अधिकारमा हुनुहुन्छ, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि व्यक्तिले यी समान चरणहरू गर्न सक्दछ के भयो भनेर जान्न।
कथाहरूमा रोक्नुहोस् के हुन्छ भनेर जान्नको लागि जब तिनीहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा ब्लक गर्छन्
जान्नको लागि के हुन्छ जब तपाईं इन्स्टाग्राममा ब्लक हुनुभयो, त्यहाँ एक तरिका पनि छ जुन व्यक्तिले गर्न सक्दछ अन्य प्रोफाइलहरूबाट इन्स्टाग्राम कथाहरू हेर्न रोक्नुहोस् त्यो पहिल्यै उसका अनुयायीहरूमा छ, यो बिना साथी बन्न रोकिन्छ। तर, जान्न को लागी तपाईंलाई कथाहरू हेर्नबाट अवरुद्ध गरेको छ अघिल्लो ब्लक भन्दा जान्नको लागि गाह्रो कुरा हो।
वास्तवमा, तपाई केवल अन्तर्ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कि कसैले तपाईंको ब्लक गरेको छ वा तपाईंलाई पछ्याएको छ, जब तपाईंले आफ्नो कथाहरू हेर्ने मानिसहरू बीचमा जाँच गर्नुहुन्छ र त्यो प्रयोगकर्ता फेला पार्दैन। र यदि समान पैटर्न बिभिन्न समय र बिभिन्न दिनमा दोहोर्याइएको छ भने, सम्भव छ कि व्यक्तिले तपाईंलाई कथाहरूबाट ब्लक गरेको छ। ब्लक केहि पूरा भएको छ कि भनेर तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुनेछ माथि उल्लेखित चरणहरूको साथ। त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन् किन एउटा व्यक्तिले अर्को ब्लक गर्ने निर्णय गर्दछ, जस्तै तल उल्लेख गरिएको।
इन्स्टाग्राममा क्र्यास हुनुको कारणहरू फेला पार्नुहोस्!
यो सामाजिक नेटवर्क भित्र तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ मनोरन्जन र दुनिया मा के हुन्छ को बारे मा जानकारी। बढि व्यक्तिहरु लाई पनि भेट्नुहोस् र तपाईको व्यवसायलाई बढाउनुहोस्। तर, सबै कुरा गुलाबी छैन, किनकि यस संसारमा हामी त्यस्तो व्यक्तिहरू भेट्टाउन सक्दछौं जसले हामीलाई अनुप्रयोगमा रहन गाह्रो पार्दछ।
सकारात्मक पक्ष यो हो कि भर्चुअल विश्वमा हामी अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई ब्लक गर्न सक्दछौं जसले हामीलाई विचलित गर्छन्, विशेष गरी यदि तिनीहरू यस्तै ढाँचा अनुसरण गर्छन्:
टिप्पणीहरू, फोटो र प्रत्यक्ष सन्देशहरूमा स्टकरहरू।
जब उनीहरूले तपाईका पोष्टहरूमा ट्याग गर्छन् वा अरुको ती मानिसहरु जुन तपाईले चिन्नुहुन्न।
केस जुन तपाईं अनावश्यक विज्ञापन देख्नुहुन्छ।
यदि कुनै तरिकाले तपाईंले अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट विचित्र प्रकाशनहरू फेला पार्नुभयो।
जब तिनीहरू सम्पूर्ण घोटाला हुन्छन् वा गुणवत्ता सामग्री अपलोड गर्दैनन्।
कुनै पनि कारणको लागि तपाईं त्यस व्यक्तिको बारेमा केहि पनि जान्न चाहनुहुन्न।
तिनीहरू सामाजिक नेटवर्क भित्र गोपनीयता मा तोड्न।
यी मुख्य कारणहरू मध्ये एक हुन सक्दछ, तथापि त्यहाँ त्यहाँ अरू पनि हुन सक्छन् जुन तपाईं बस्नुहुन्छ, यदि त्यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंलाई आवश्यक भएमा लाग्छ भने। व्यक्तिलाई रोक्नुहोस् तपाईले यो मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हामीले पहिले नै थाहा पाएका छौं कि हामीले कसैलाई रोक्नु पर्ने कतिवटा कारणहरू हुन सक्दछन्, तर यो जान्न पनि सजिलो हुन्छ कि तपाईंले यो कार्य एकपटक कार्यान्वयन गर्नुभएपछि के हुन्छ।
जब म इन्स्टाग्राममा कसैलाई रोक्छु
यदि तपाईंले एक व्यक्तिलाई ब्लक गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ भने इन्स्टाग्राम किनभने उसले चिन्ता गर्न छोड्दैन र तपाईंले उसलाई एक्लै छोड्न पठाउनु भएको संकेतको व्याख्या गर्दैन, अब के हुन्छ होला भन्ने सोच्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाइँ त्यो प्रयोगकर्तालाई रोक्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको प्रोफाइल, तपाइँका प्रकाशनहरू वा तपाइँका कथाहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्न, तपाइँ तिनीहरूको पहुँच बाट हराउनुहुनेछ।
मलाई तपाईं र टिप्पणीहरू मनपर्दछ
प्रतिक्रियाहरू जुन प्रयोगकर्ताले तपाईलाई अवरुद्ध गरिसकेका छन, जस्तै "लाइक" र टिप्पणीहरू तपाइँको फोटो र भिडियो बाट हराउनेछ। तर तपाईं टिप्पणी मेट्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक व्यक्ति तपाईंले अवरुद्ध गर्नुभएको व्यक्तिले अन्य पोष्टहरूमा तपाईंको प्रतिक्रियाहरू देख्न सक्दछ, तर तपाईंको प्रोफाइल पहुँच गर्न सक्षम हुनु बिना।
एकचोटि तपाईंले कसैलाई रोक्नुभयो भने, तपाईंसँग त्यस व्यक्तिसँग हुन सक्ने कुराकानी च्याटमा रहनेछ। तर तपाईं सन्देश पठाउन सक्षम हुनुहुने छैन त्यो प्रयोगकर्ता तपाईलाई होईन। थप रूपमा, यदि तपाई व्यक्तिसँग समूह च्याटमा हुनुहुन्छ भने, एक संवाद बाकस देखा पर्नेछ, जसले तपाईंलाई समूह बस्न वा छोड्न चाहान्छ भनेर सोध्नेछ।
जान्नको लागि उल्लेख गर्नुहोस् जब तिनीहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा रोक्दछन्
व्यक्ति वा व्यक्ति तपाईंले अवरुद्ध गर्नुभयो अनुप्रयोगमा तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो उल्लेख गतिविधिमा देखा पर्दैन।
यदि तपाईं पनि यो हुनबाट रोक्न चाहानुहुन्छ भने, आफ्नो उपयोगकर्ता नाम बदल्नुहोस् ताकि म तपाईंलाई उल्लेख गर्न सक्दिन।
तथ्य यो छ कि यो हुन्छ जब तपाईं इन्स्टाग्राममा ब्लक हुँदा पनि सामाजिक नेटवर्क द्वारा नै गर्न सकिन्छ।
कारण किन इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई ब्लक गर्दछ र के हुन्छ जब उनीहरूले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा रोक्दछन्
त्यहाँ धेरै सर्तहरू छन् जुन इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा छ र यदि ती मध्ये कुनै पनि एक उल्ल .्घन भयो भने, प्रयोगकर्ता स्वचालित रूपमा ब्लक हुनेछ।
एकै समयमा धेरै "मनपर्दो" र अनुयायीहरू
यो इन्स्टाग्राममा ब्लक हुनका लागि सब भन्दा स्पष्ट कारणहरू मध्ये एक हो, त्यो हो, जब "मनपर्दो" र अनुयायीहरूको संख्या धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा यो हुन सक्छ। यदि तपाईं केहि तेस्रो पार्टी प्रमोशन उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ वा जब मैन्युअल कार्यहरू प्रयोगकर्ता प्रोफाइलहरू परीक्षण बिना नै प्रदर्शन गरिन्छ।
आधिकारिक इन्स्टाग्राम निर्देशन अनुसार सीमितता:
प्रति घण्टा "मनपर्दो" को अधिकतम संख्या 60 हो।
प्रति घण्टा टिप्पणीहरूको अधिकतम संख्या 60 हो।
प्रति घण्टा अनुयायीहरूको अधिकतम संख्या 60 हो।
प्रति घण्टा निजी सन्देशहरूको अधिकतम संख्या 60 हो।
थप रूपमा, इन्स्टाग्रामले फलोअरहरूको संख्या र गैर-फलोअरहरूको साथसाथै अनावश्यक प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक्दछ। त्यसकारण तपाईं प्रति दिन 1440 कार्यहरू तपाइँको खातामा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्न।
अत्यधिक पोष्टहरू र के हुन्छ जब उनीहरूले तपाईंलाई ब्लक गर्छन् इन्स्टाग्राम हो
यो धेरै पटक प्रकाशित नगर्न सिफारिश गरिन्छ, त्यस पछि केवल इन्स्टाग्रामले पोष्टहरूको सटीक संख्या नियन्त्रण गर्दछ तिनीहरू दैनिक गर्न सकिन्छ। एकै तरीकाले यो सुझाव दिइन्छ कि उही तस्विर बिभिन्न खाताहरूमा एकै समयमा प्रकाशित नगर्नुहोस्, किनकि यसले सामाजिक नेटवर्कको एक अलार्मलाई राम्रोसँग प्रकाश गर्दछ।
प्रतिलिपि अधिकार उल्ल .्घन
तपाईंको प्रोफाईलमा तपाईंको फोटो र भिडियोहरू साँच्चिकै तपाईंको हुनुपर्दछ, यदि हैन भने तपाईंसँग कम्तिमा उनीहरूको प्रकाशन गर्न लेखकको अधिकार हुनुपर्दछ। साथै जब तपाईं अर्को प्रयोगकर्तासँग छवि साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले फोटोमा ट्याग गर्नु पर्छ यदि तपाईंसँग इन्स्टाग्राम खाता छ र वर्णनमा यसको नाम उल्लेख गर्नुहोस्।
सामाजिक मिडिया नियमहरूको उल्लंघन
जब एक प्रयोगकर्ताले फोटो वा भिडियो नग्न शरीर, यौन सामग्री र उनीहरूको प्रोफाइलमा हिंसाको साथ अपलोड गर्दछ, यो अनुपयुक्त सामग्री मानिन्छ। थप रूपमा यो पीछा गरिएको उद्देश्यमा निर्भर हुँदैन, यसले खाता लक पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
रिपोर्ट बटन केही कारणका लागि खतरनाक खाता विचार गर्दा प्रयोग गरिन्छ। एक ब्लक तब हुन्छ जब अन्य प्रयोगकर्ताहरूले खाता रिपोर्ट वा चोरी चोरी, अपमान, अनुपयुक्त सामग्री, अन्य।
बिभिन्न आईपी ठेगानाहरू
जब तपाईं धेरै उपकरणहरूबाट लगईन गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई पाठ सन्देशहरू मार्फत पुष्टि गर्नुहुन्छ, सम्भावना कि इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मले तपाईंलाई रोक्दछ लगभग शून्य छ। तर यदि तपाइँ बिभिन्न उपकरणहरू र आईपी ठेगानाहरूबाट सुरू गर्नुहुन्छ भने, सामाजिक नेटवर्कले सोच्न सक्छ यो कार्य तपाइँको खाता ह्याक भइरहेको उत्पादन होवास्तवमा, अनुप्रयोगको प्रतिक्रिया लगभग तत्कालै हो।
तपाईका अनुयायीहरूको सूची हेर्नुहोस् तपाईलाई इन्स्टाग्राममा रोक्दा के हुन्छ थाहा पाउन
यदि तपाइँ कसैलाई इन्स्टाग्राममा रोक्नुहुन्छ भने के हुन्छ?